नेपाली किशोरीमाथि अमेरिकामा शोषण | नेपाल इटाली डट कम
नेपाली किशोरीमाथि अमेरिकामा शोषण
September 14, 2010 — nepalitaly
भारत दोषीलाई जोगाउने पक्षमा
अमेरिका २७, भदौ
अमेरिकामा नेपाली किशोरी शान्ति गुरुङमाथि चरम श्रमशोषण गर्ने भारतीय वरिष्ठ अधिकारीलाई बचाउन भारतको परराष्ट्र मन्त्रालय लागिपरेको छ　। तर, अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा भयानक विषय बन्दा पनि नेपाल सरकार भने शान्तिमाथि भएको ज्यादतीबारे मौन छ　।
सन् २००६ को मार्चमा १७ वर्षकी थिइन् शान्ति　। तर, उनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि भारतीय स्थायी प्रतिनिधिको कार्यालयकी तत्कालीन कन्सुलेट नीना मलहोत्राले अपहरणको शैलीमा अमेरिका ल्याइन्　। शान्तिको वास्तविक उमेर १७ वर्ष भए पनि नीनाले शान्तिको उमेर १८ वर्ष पुगेको विवरणसहितका नक्कली कागजपत्र बनाएर उनलाई भारत हुँदै अमेरिका ल्याएकी हुन्　।
हरेक महिना पाँच हजार तलब दिने र प्रत्येक ६ महिनामा तलब बढाइदिने प्रलोभन देखाएर शान्तिलाई अमेरिका ल्याइएको हो　। कक्षा ८ सम्मको मात्र अध्ययन गरेकी शान्तिलाई अंग्रेजी भाषाको साधारणमात्र ज्ञान थियो　। त्यसैले उनले अंग्रेजी भाषामा तयार पारिएका कागजपत्रहरू पढ्न र बुझ्न सक्ने कुरै भएन　।
तर, राष्ट्रसंघकी स्थायी प्रतिनिधिको कार्यालयकी कर्मचारी नीनाले भारतमा नै यस्ता नक्कली कागजपत्रमा शान्तिलाई हस्ताक्षर गराएकी थिइन्　। कागजपत्रको प्रतिलिपिसमेत शान्तिलाई नदिइएकाले उनलाई कस्ता कागजपत्रमा हस्ताक्षर गराइयो भन्नेसमेत पत्तो भएन　।
नीनाले आफू र आफ्ना श्रीमान्का लागि खाना बनाउने र सामान्य घरायसी काममा सघाउने भन्दै कागजपत्र बनाएर शान्तिलाई अमेरिका पुर्‍याएकी थिइन्　।
अमेरिका पुर्‍याएपछि शान्तिलाई न्युयोर्कस्थित ४३ स्टि्रटको पूर्वको २३५ नम्बर घरको १० नम्बर अपार्टमेन्टमा रहेको नीनाको निवासमा काममा लगाइयो　। खाना बनाउने र हलुका घरायसी काममा सघाउने भनेर अमेरिका ल्याए पनि शान्तिलाई दैनिक १६ घन्टा काममा मात्र लगाइएन, चरम मानसिक यातनासमेत दिइयो　। शान्तिले दुईजनाका लागि मात्र होइन, नीनाको निवासमा दिनहुँ जमघट हुने कूटनीतिज्ञहरूका लागि सबै परिकार पकाउनुपथ्र्यो भने सबै भाँडा पनि एक्लैले सफा गर्नुपथ्र्यो　।
दैनिक सबै कोठा सफा गर्नेलगायतका काम गर्दा शान्तिको १६ घन्टा बित्थ्यो　। १६ घन्टाको कामपछि पनि शान्तिले आनन्दसँग सुत्न पाउँदिनथिन्　। मध्यरातमा नीनालाई मसाज गरेपछि मात्र शान्तिको दिनभरको काम पूरा हुन्थ्यो　।
शान्तिलाई सुत्नका लागि उपयुक्त विस्तारासमेत दिइएको थिएन　। दिनभरको थकानपछि भुइँमा सुत्नुपर्ने बाध्यता थियो　। शान्तिलाई सामान्य किनमेलका लागि रासन पसलमा जानबाहेक अरू ठाउँमा जान प्रतिबन्ध लगाइएको थियो　।
शान्तिको पासपोर्टसमेत नीना मलहोत्राकै कब्जामा रहेकाले शान्तिले बाहिर जाने हिम्मतसमेत गरिनन्　। बाहिर गयो भने प्रहरीले समातेर दुःख दिन्छ भन्दै नीनाले तर्साउने गरेकीले पनि शान्तिले बाहिर जाने हिम्मत गरेकी थिइनन्　।
नेपाली युवतीमाथि श्रमशोषण गर्ने भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालय ‘साउथ ब्लक’की निर्देशक डा. नीना मलहोत्राविरुद्ध अमेरिकी अदालतमा मुद्दा चलेपछि भारतीय अधिकारीहरू सक्रिय भएका छन्　। तर, नेपाली चेलीको बारेमा बोल्ने नेपालमा कोही छैन　।
नीनाको अपराधको विषयमा स्थानीय मानवअधिकारवादीहरूको पहलमा अमेरिकी अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ　। अमेरिकी अदालतमा मुद्दा चलिरहेको वेला भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले भने नीनालाई अमेरिकी सरकारले सफाइ दिइसकेको भन्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूमार्फत प्रचारबाजी गरिरहेका मात्र छैनन्, मलहोत्रालाई पूर्ववत् जिम्मेवारीमा फर्काएका छन्　।
तर अमेरिकी अदालतमा मुद्दा चलिरहेको व्यक्तिलाई निलम्बन गरेर कानुनी प्रक्रियालाई सघाउनुको साटो भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले नीनालाई पूर्ववत् काममा लगाएको छ　। राष्ट्रसंघका लागि न्युयोर्कस्थित भारतीय स्थायी प्रतिनिधिको कार्यालयकी पूर्वकन्सुलेट नीनालाई बचाउन भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णु प्रकाशले सञ्चारमाध्यमहरूमार्फत प्रचारबाजी गरिरहेका छन्　।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार नीना भारत र्फकनु एक दिनअघि शान्ति गुरुङ बेपत्ता भएकी हुन्　। तर, श्रम गर्न अमेरिका गएकी सामान्य मजदुर किशोरी शान्ति भारतीय अधिकारीलाई अप्ठ्यारो पार्नेगरी बेपत्ता भइन् ? पत्याउन गाह्रो छ　। त्यसमाथि बेपत्ता भएकी भनिएकी शान्ति नीनाकै घरमा भेटिएकी थिइन्　।
अहिले न्युयोर्कको युनाइटेड स्टेट डिस्टि्रक्ट कोर्टमा भारतीय वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ नीना मलहोत्रा र उनका श्रीमान् इन्जिनियर जोगेश मलहोत्राविरुद्ध मुद्दा चलिरहेको छ　। तर, एउटी नेपाली किशोरीले आफूमाथि श्रमशोषण भएको भन्दै लगाएको आरोपमाथि अमेरिकी अदालतमा मुद्दा चलिरहेको वेला भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालय किशोरीविरुद्ध लागेको छ　। दासत्व र श्रमशोषणको विषयमा मानवअधिकारवादीले चलाएको यो मुद्दामा नाबालिग शान्ति गुरुङलाई नीनाले मानसिक र शारीरिक यातना दिएको उल्लेख छ　।
मासिक तलब प्रतिमहिना तीन डलर
अमेरिकी कानुनअनुसार न्युयोर्कमा हरेक कामदारलाई प्रतिघन्टा सात डलर २५ सेन्टभन्दा कम पैसामा काममा लगाउन पाइँदैन　। न्यूनतम ज्यालाभन्दा कममा काम लगाउने जोकोही पनि कानुनी कारबाहीको भागीदार हुन्छन्　। तर, शान्तिलाई भने प्रतिघन्टा एक सेन्ट अर्थात् महिनाको तीन डलर (दुई सय २२ नेपाली रुपैयाँ) दिइयो　।
दैनिक १६ घन्टा काम गर्ने शान्तिले नियमअनुसार त हरेक दिन कम्तीमा ११६ डलर पाउनुपर्ने थियो, तर शान्तिलाई भने दिइयो, जम्मा १० सेन्ट　। अर्थात् हरेक महिनाको दुई लाख ५७ हजारको सट्टा जम्मा दुई सय २२ रुपैयाँ　। कहाँको दुई लाख ५७ हजार, कहाँको दुई सय २२ रुपैयाँ　। नेपाली रुपैयाँमा नेपालीमाथि भारतीयले अमेरिकामा यस्तै अन्याय गरे　। त्यसमाथि राष्ट्रसंघकी स्थायी प्रतिनिधिले　।
यस्तो चरम आर्थिक शोषणमा परेकी शान्ति सन् २००९ को जुलाईमा नीनाको घरबाट भागेर एकजना नेपाली महिलाको घरमा शरण लिन पुगेकी थिइन्　। तर, पैसाको अभावमा शान्तिले एक वर्षसम्म अदालत जाने हिम्मतसमेत गरिनन्　।
शान्तिलाई सघाउँदै नेपाली अधिकारकर्मी र अमेरिकी कानुनविद्
एक वर्षसम्म अदालत जान नसकेकी शान्ति केही समय पहिले नेपाली महिलाको सहयोगमा हारगुहार गर्दै अमेरिकामा रहेको नेपाली अधिकारवादी संगठन अधिकारमा पुगेकी हुन्　। अधिकारको आग्रहमा अमेरिकी कानुनविद् मिकेल कर्नाल शान्ति गुरुङको पक्षमा सघाउन राजी भए　।
त्यसपछि शान्ति गुरुङको तर्फबाट कर्नालले अमेरिकी अदालतमा नीना मलहोत्राविरुद्ध मुद्दा दायर गरे　। अदालतमा मुद्दा दायर भएको केही समयपछि नै मुद्दा चलिरहेकै अवस्थामा भारतीय सरकारले मलहोत्रालाई सफाइ दियो　। अमेरिकी अदालतमा मुद्दा चलिरहेको वेला भारत सरकारले आफ्नै अधिकारीलाई सफाइ दियो　। यो विषयले अमेरिकी कानुनविद् कर्नाल पनि अचम्म परेका छन्　।
शान्ति गुरुङमाथि श्रमशोषण गरेको र अमेरिका ल्याउँदासमेत अध्यागमनलाई उमेर ढाँटेकाले मलहोत्रामाथि कानुनी कारबाही भएरै छाड्ने कर्नालको विश्वास छ　। अमेरिका ल्याउँदा शान्ति १७ वर्षकी भए पनि नीनाले परराष्ट्रको पहुँच प्रयोग गरेर १८ वर्षकी वालिग नागरिक देखाएकी थिइन्　। तर, अनपढ शान्तिसँग अमेरिका जाने सपना मात्र थियो, नीनाको यातना थाहा थिएन　।
भारतले नीनालाईर् कूटनीतिक संरक्षण दिन खोजेकोमा पनि अमेरिकी वकिल कर्नालले विरोध गरेका छन्　। भारतीय सरकारले नीनालाई संरक्षण दिन खोजे पनि अमेरिकामा रहेका नेपाली महिला अधिकारकर्मीहरू भने श्रमशोषण गर्ने नीनालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रयत्नशील रहेका छन्　। अधिकार संस्थाका तर्फबाट डाइरेक्टर लुना रञ्जितले नीनालाई कानुनी कारबाहीको भागीदार बनाउन पीडित शान्तिलाई सघाइरहेकी छिन्　। अधिकारकी कम्युनिटी वर्कर नर्वदा क्षेत्री भन्छिन्, ‘शान्तिलाई मानसिक यातना दिने र श्रमशोषण गर्ने नीना एक दिन अवश्य पनि कारबाहीको भागीदार हुनेछिन्　।’
नीनाविरुद्धका नौ आरोप
नीनादम्पतीले शान्ति गुरुङलाई गैरकानुनी हिसाबले घरमा नै बन्धक बनाएको　।
कानुनमा व्यवस्था भएभन्दा अत्यन्तै धेरै घन्टा काममा लगाएको　।
काम गरेअनुसार ज्याला नदिएको र ४० महिनाको अवधिमा शान्तिलाई जम्मा १२० डलरमात्र दिएको　।
नीनाले शान्तिको पासपोर्टसमेत कब्जा गरी घरबाहिर जानमा प्रतिबन्ध लगाएको र घरमा भोजभतेर हुँदासमेत सबै काम शान्तिलाई नै लगाएको　।
शान्तिलाई उपयुक्त विस्तारासमेत नदिई भुइँमा सुत्न बाध्य पारेको　।
शान्तिलाई दैनिक मसाज गर्न लगाएर नीनाले घरेलु हिंसाको सिकार बनाएको　।
नीनाको निवासमा लगातार हुने कूटनीतिक पार्टीमा अत्यन्तै धेरै काम लगाएको　।
शान्तिलाई राम्रोसँग खाना पनि नदिएको, एकपटक पाउरोटीको टुक्रा खाँदा अनुमति नलिई खाएको भन्दै निर्घात कुटेको र शान्तिले भात माग्दा पनि नदिएको　।
साना कुरामा पनि ठूलो धम्की दिने गरेको र पटकपटक मानसिक यातनासमेत दिने गरेको
One Response to “नेपाली किशोरीमाथि अमेरिकामा शोषण”
kura nikai gairo rahechha,ma pani sayog gharna chahanchhu,tara malai pani idea bhane chaina,yesko lagi ke gharnu parla,
« ‘नेपालमा हुने वैदेशिक हस्तक्षेप अस्वीकार्य’
जान्नेलाई फेसबुक – नजान्नेलाई बेवकुफ ! »